Sarkaal Turkish Ah Oo Lagu Dilay Magaalada Muqdisho. – Bogga Calamada.com
Sarkaal Turkish Ah Oo Lagu Dilay Magaalada Muqdisho.
Rag hubeysan oo wata gaari nooca raaxada ah waxey weerar ku qaadeen gaari uu la socday sarkaal sare oo ka tirsanaay safaaradda dowlada Turkiga ay ku leedahay magaalada Muqdisho’iyadoona warar dheeraad ah ay kasoo baxayaan weerarka sarkaalka.
Weerarkan waxa uu sigaar ah kaga dhacay agagaarka dhismaha madaxtooyadii hore ee Cabdi Qaasim’iyadoona sarkaalka rasaas dhowr ah ay ka haleeshay qeybaha sare ee jirka taasi oo sababtay in sarkaalka uu ku geeriyooda gudaha gaarigiisa.
Ragga weerarka fuliyay ayaa goobta ka baxsaday’waxaana goobta weerarka uu ka dhacay muddo xiray maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka oo goobta soo gaaray’iyadoona si aad ah uu u burburay gaarigii uu watay sarkaalka Turkish-ka ah.
Dowlada Turkiga ayaa ka mid ah dowladaha shisheeya ee dhibaatada xoogan ku haya shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho gaar ahaan dhanka ganacsiga oo dowlada Turkiga inta badan ay la wareegtay goobihii ay ka xamaalan jireen kumanaan shacab ah oo Muqdisho ku nool.